Adobe Flash nyefere HTML5 ma hapụ ngwaọrụ mkpanaka | Site na Linux
Adobe Flash nyere HTML5 na ngwaọrụ mkpanaka ditches
Adobe ekwuputala na ya ga-akwụsị itolite Flash maka nyocha site na ekwentị mkpanaaka. Ihe kpatara ya bụ na ugbu a HTML5 ọ na-arụ ọrụ na ngwaọrụ ndị a, na ụfọdụ naanị. Ya mere, ọ ghọwo ihe ngwọta kachasị mma maka igosipụta ọdịnaya na nyiwe igwegharị.
Otu n'ime ụlọ ọrụ izizi hapụrụ Adobe format bụ Apple. N'ezie, Steve Jobs gara ịkọwa ihe kpatara ya ji kpọ Flash asị na Mee nke afọ gara aga na a emeghe akwụkwọ ozi.
Agbanyeghị, Adobe akpatabeghị ihe omume a na ntinye nke blog nke Danny Winokur, onye osote onye isi na onye isi njikwa mmekọrịta mmekọrịta Adobe, kwupụtara mkpebi ụlọ ọrụ ahụ mere.
N'ime ya, ọ na-echeta na "ruo ihe karịrị afọ iri, Flash kwere ka e mepụta ma jiri ya rụọ ọrụ na weebụ." Agbanyeghị, HTML5 ugbu a "a na-akwado ụwa niile na ngwaọrụ mkpanaka dị oke mkpa, ụfọdụ ụfọdụ naanị." Ha kọwara, nke a emeela ka asụsụ bụrụ "ihe ngwọta kachasị mma maka ịmepụta na igosipụta ọdịnaya na ihe nchọgharị na ntanetị."
1 Nsogbu Flash
2 Njehie dị oke egwu
Mana Flash bụ teknụzụ nke Adobe nwere ihe ruru otu narị pacenti, na mgbakwunye na eziokwu na ndị ji ya ga-enwerịrị nkwekọrịta iji nye ya ikikere (agbanyeghị na ọ bụ n'efu maka ndị ọrụ ikpeazụ), ụdị nsogbu ndị ọzọ amatala ogologo oge.
Otu n'ime ha bụ na n'ihi ọdịdị ya ọ bụ onye na-azụ ahịa nke CPU, ihe ndị ọrụ na-ahụ n'ụzọ zuru oke mgbe ha gara na ibe nwere ihe Flash nwere: oriri nke ihe nrụpụta na-abawanye na mgbe ụfọdụ ngwa ndị ọzọ na-ata ahụhụ ya.
Mana nsogbu kachasị njọ abụghị nke ahụ, mana ihe oriri ahụ pụtara na ngwaọrụ dịka ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ mbadamba: mkpụmkpụ nke ndụ batrị, ihe na-emegide ahụmịhe nke iji ngwaọrụ kwụ ọtọ site na mbenata oke nnwere onwe ya .
A ga-atụkwasịkwara na nke ọhụrụ nsụgharị e n'ọtụtụ ebe katọrọ n'ihi na a otiti na chinchi na obere chinchi na-eme nchọgharị "okuku" na a ga-restart.
Ike gwụrụ nke ịhụ nsogbu nsogbu, oriri na chinchi edozighi, yana dabere na ikpo okwu 100% nke Adobe nwere, Steve Jobs n'onwe ya bipụtara akwụkwọ ozi mepere emepe na weebụsaịtị Apple na ebumnuche ịkọwa ihe kpatara na ha abụghị. iji tinye Flash na iPad.
Okwu ahụ dị ntakịrị mkpasu iwe, na mkpebi ahụ gbara ajụjụ, mana ọrụ dị mma: iPad na iPhone nwere ike ibi ndụ na-enweghị Flash, ebe ọ bụ na e nwere ụkpụrụ ndị ọzọ maka ikiri vidiyo na ọtụtụ peeji esila na Flash iji HTML5 oge a, dakọtara na imeghe.
Njehie dị oke egwu
N'agbanyeghị nke a, ha na-azọrọ na ha nwere "obi ụtọ" n'echiche ahụ ma ga - aga n'ihu na - arụ ọrụ "na ndị isi egwuregwu na obodo HTML5, gụnyere Google, Apple, Microsoft na RIM."
Ha kwupụtakwara na ọ bụ ezie na ha agaghị anọgide na-azụlite Flash iji rụọ ọrụ na ihe nchọgharị mkpanaka mgbe ntọhapụ nke Flash Player 11.1 maka gam akporo na BlackBerry Playbook, ha ga-aga n'ihu na-enye mmelite nche ma dozie ahụhụ dị egwu maka nhazi ndị dị ugbu a.
Otú ọ dị, nke a apụtaghị na ụlọ ọrụ ahụ na-ezube ịhapụ Flash kpamkpam, kama ọ ga-arụ ọrụ na ebe ọ kwenyere na ya nwere ike "inwe mmetụta kachasị na ụlọ ọrụ", dị ka egwuregwu ma ọ bụ vidiyo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Adobe Flash nyere HTML5 na ngwaọrụ mkpanaka ditches
Ee, ee! (Ịkụ aka)
Zaghachi Javier Debian Bb Ar
Eziokwu, Achọghị m ịma ma ọ bụrụ na adobe kpamkpam kpamkpam ebe ọ bụ na ọ naghị enye aka ihe ọ bụla na Linux, ọ na-eme ka anyị bụrụ ndị ọrụ Linux.
Gbanwee nsogbu gị niile na Touchpad